15 Dugsiga ugu fiican ee injineernimada korantada adduunka
March 1, 2022 Adaeze Nwachukwu
15 Iskuulada injineerinka Korantada Korantada ugu Fiican adduunka
Waa kuwan jaamicadaha lagu muujiyey liistada ugu sarreysa iskuulada injineernimada korantada ugu fiican adduunka kuwaas oo u furan in lagu aqbalo ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba.
Ma dooneysaa inaad ku raad-gasho xirfad injineernimada korontada, waxaad dooneysaa inaad noqoto injineer koronto oo sharciyeysan? Waxaa jira jaamacado aad u tiro badan oo adduunka oo dhan ah oo bixiya barnaamijyo injineernimada korantada, laakiin ogaanshaha hay'adda saxda ah ee la dooran karo waxay noqon kartaa wax adag oo hawl ah.
Dabcan, barashada barnaamij kasta oo injineernimada koronto ee jaamacad ama kulleejo kasta si aad u noqotid injineer koronto waa mid aad u adag oo u baahan tiro sanado wanaagsan ah si loo gaaro, laakiin dhamaadka dambe ayaa hubaal si fiican u bixin doona.
Waa maxay Injineerka Korantada?
Maxay sameeyaan Injineeriyada Korantada?
Sidee ayuu u adag yahay injineernimada korontada?
Injineerada korantada ma loo baahan yahay?
Xagee ka shaqeeyaan injineerada korontada?
Waddankee ayaa ugu fiican daraasadda injineernimada korantada?
Maxay yihiin iskuulada injineernimada korantada ugu fiican?
15 Dugsiyada injineernimada korantada ugu fiican
Jaamacadda Illinois (UIUC)
Jaamacadda Carnegie Mellon (CMU)
Machadka Teknolojiyada ee California (Caltech)
Jaamacadda Maryland (UMD)
Jaamacadda Florida - Gainesville
Dugsiga Colorado ee Miinooyinka
Injineernimada korontadu waa fikirka naqshadeynta, dhismaha iyo dayactirka aaladaha korantada ee horey u jiray, qaababka, qalabka, mishiinada iyo nidaamyada. Waxay sidoo kale ku lug leedahay cilmi-baarista lagu ogaanayo isbeddellada cusub iyo ilaha korantada iyadoo leh dabeecadda gaarka ah ee aagga korantada ee ku wareegsan walxaha kale.
Injineerada korantada ayaa iska leh howsha soo saarida aaladaha korontada iyo elektarooniga ah ee cusub ee la aqoonsan yahay isla markaana awooda inay si hufan u qabtaan shaqada loo abuuray inay qabtaan. Waxay ku lug leeyihiin cilmi baarista iyo soosaarida aaladaha korontada iyo tamarta tamarta yar ee tamarta cunaya si ay gacan uga geystaan ​​dhowrista tamarta iyo kordhinta waxtarka.
Maaddaama injineernimadu ay ku saabsan tahay tiknoolajiyadda, waxaa wanaagsan in la ogaado in injineernimada korontadu ay tahay laan ka baxsan injineernimada oo inta badan ka shaqeysa tikniyoolajiyadda korantada. Laydh la’aan, tikniyoolajiyaddu ma kori lahayd inta ay le’eg tahay.
Maadaama aad tahay injineer koronto, waxaad ku jiri kartaa ganacsiga abuuritaanka aalado koronto oo cusub, qaabeynta nidaamyo cusub oo koronto iyo noocyo hor leh ama dayactirka aaladaha ama nidaamyada korantada ee horay loo dhisay.
Injineer koronto ayaa sidoo kale weyn ka noqon kara qeybta cilmi baarista korantada, isagoo ogaanaya ilaha cusub ee korantada, qaab beddelidda awoodda korantada, daraasad qoto dheer oo ku saabsan aagga korantada si loo ogaado astaamo cusub oo koronto iyo aagag koronto lagu soo oogay.
Injineernimada korontadu ma aha koorso ama xirfad adag. Waa mid xiiso leh, ujeedo ujeedo leh oo qoreysa cilmi baaris badan iyo ku celcelin. Waxay u muuqan kartaa mid dhib badan bilowga sababtoo ah kalfadhiyo badan oo wax ku ool ah laakiin markaad sii socoto oo aad ula qabsato nidaamyada iyo borotokoolka, waxaad bilaabi doontaa inaad qadariyo koorsada.
Liiskan iskuulada injineernimada korantada ugu fiican ee halkan lagu soo bandhigay waxaa loo sameeyay inay kaa caawiyaan inaad ogaato dugsiyada ugu sareeya adduunka si aad u hesho khibrad buuxda ee injineernimada korantada. Iskuulladani waxay hubaal ka dhigayaan waayo-aragnimada injineernimada korontada mid ka dhib yar oo qancisa.
Xawaaraha horumarka tikniyoolajiyadda adduunka maanta, shaki kuma jiro injineerada korantada ayaa aad loogu baahan yahay. Laga soo bilaabo microchips-ka qaar ka mid ah aaladaha elektiroonigga ah waxaan u adeegsannaa mashiinnada waaweyn ee culus ee beeraha iyo warshadaha, adeegyada injineerada korantada ayaa baahi badan loo qabaa.
Maadaama aad tahay injineer koronto, waxaad ka shaqeyn kartaa koronto ballaaran iyo injineernimo saafi ah, wax soo saar iyo dhowr warshado kale iyo hay'ado adduunka oo dhan ah sida warshadaha badda, warshadaha baabuurta, warshadaha aerospace, warshadaha dhismaha, warshadaha dhalinta tamarta, warshadaha saliidda iyo gaaska, warshadaha isgaarsiinta , warshadaha dhismaha iwm.
Haddii aad isku aragto warshadaha badda sida injineer koronto, waad ka shaqeyn kartaa dusha qayb ka mid ah kooxda korontada markabka si aad u hubiso in markabka koronto ahaan uu markasta xaaladdiisu wanaagsan tahay ama uu goobjoog ka yahay haddii dusha cillad koronto ay jirto. Waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa dekedda si aad gacan uga geysato dayactirka nidaamyada korantada ee halkaas ku yaal ama aad u dhisatid kuwo cusub oo ujeeddooyin gaar ah leh
Haddii aad isku aragtid warshad kale sida injineer koronto, sharaxaadda shaqadaada ayaa laga yaabaa inay si uun la xiriirto maadaama ay had iyo jeer ku xirnaan lahayd hagaajinta nidaamyada korantada, sameynta cilmi baarista aagga korantada, iyo dhismaha nidaam koronto oo shaqeynaya.
Faransiiska, Mareykanka, Jarmalka, Boqortooyada Midowday, Kanada, Australia ayaa ka mid ah xulalka ugu sarreeya meelaha ugu wanaagsan ee lagu helo shahaadada injineernimada korantada.
Ficil ahaan, waddan kasta oo wanaagsan waa inuu lahaadaa ugu yaraan hal jaamacad oo ugu yaraan ah celcelis ahaan meel lagu barto injineernimada korontada marka loo eego heerarka adduunka.
Isku soo wada duuboo, haddii aad rabto inaad sida ugu fiican uga soo baxdo xirfaddaada injineernimada korantada, waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho dugsiyada ugu fiican deegaankaaga injineernimada korantada. Waxaa jira dhowr iskuul oo adduunka oo dhan ah oo kufiican xirfad ku shaqeynta injineernimada korontada marka laga reebo kuwa halkan ku taxan. Taas awgeed, waxaan maqaalkan ugu soo bandhignay 15ka sare ee jaamacadaha injineernimada korantada adduunka ee loo tixgeliyo sida ugu fiican.
Haddii aadan ka soo bixi karin mid ka mid ah jaamacadahaas, waa inaad ka heshaa mid ka mid ah iskuulada ku yaal deegaankaaga oo ku wanaagsan injineernimada korontada iyo isqorista. Haddii aad joogtid Kanada, waxaad fiirin kartaa maqaalkeenna ku saabsan iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho oo go'aan ka gaadho haddii aad halkaa ka dooran karto.
Haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, waxaad fiirin kartaa qaar ka mid ah kuwa la heli karo jaamacadaha injineernimada dhexdhexaadka ah kaas oo sidoo kale bixiya barnaamijyo injineernimo koronto iyo shahaadooyin.
Waxaan diyaarinay liistada iskuulada injineernimada korantada adduunka ugu fiican ee kugu habboon inaad ogaato. Jaamacadahaan marka loo eego qiimeynta QS kaliya maahan jaamacadaha ugu fiican ee injineernimada korantada laakiin sidoo kale waxay guud ahaan ka mid noqdeen iskuulada ugu fiican adduunka.
Halkan, waxaan ku siinayaa liistada 15-ka jaamacadood ee adduunka ugu fiican si aad u sii wado xirfaddaada injineernimada korantada.
Jaamacadda Carnegie Mellon
Machadka Teknoolajiyadda California
Iskuulka Colorado ee Macdanta.
Jaamacadda Stanford waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal Stanford, California. Waxaa aasaasay sanadkii 1885 Leland iyo Jane Stanford si loogu xasuusto ilmahooda kaliya, Leland Stanford Jr. oo u dhintay cudurka tiifowga da'da 15 jir. Marka laga hadlayo barashada barnaamijka injineernimada korantada, Stanford si fudud looma garaaci karo.
Qeybta injineernimada korontada ee Jaamacadda Stanford waxaa la aasaasay 1894, 9yrs kadib markii jaamacada lafteeda la aasaasay, taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah waaxaha injineernimada korontada ugu da'da weyn adduunka.
Stanford waxay bixisaa 3 barnaamijyo shahaadooyin kala duwan ah oo ku saabsan injineernimada korantada, kuwa ugu caansanna waa barnaamijka Master's Degree.
Stanford wuxuu bixiyaa Bachelor of Science oo uu ugu weyna yahay injineernimada korontada isagoo fursad u leh baaritaanka iyo tijaabinta mashaariicda. Ardaygu wuxuu dooran karaa mid ka mid ah saddexda anshax ee aasaasiga ah ee uu diiradda saarayo:
Nidaamka Qalabka Qalabka iyo Qalabka.
Nidaamka Macluumaadka iyo Sayniska.
Farsamada Jirka iyo Sayniska.
Haddii aad xiiseyneyso wax ka sii horumarsan injineernimada korontada, wax dhib ah kuma heli doontid inaad ka dhigto Jaamacadda Stanford xulashadaada
Halkan booqo dugsiga
Way cadahay in Harvard ay tahay mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada korantada adduunka ugu fiican. Waa jaamacad gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn oo ku taal Cambridge, Massachusetts. Waxaa la aasaasay 1636 waxaana lagu magacaabay 2nd ee daabacaadda 2020 ee kuliyadaha ugu wanaagsan iyo jaamacadaha qaranka.
Harvard waxaa looga yaqaanaa aduunka heer sare xagga tacliinta, taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan adduunka. Harvard wuxuu ka kooban yahay 13 iskuulo iyo machadyo wuxuuna hoy u yahay Dugsiga ugu sareeya ee injineernimada iyo sayniska la adeegsado oo soo saaro shaqo horudhac ah anshaxa injineernimada korantada.
Astaamaha barnaamijyada injineernimada korontada;
Wax ku barashada Harvard Collage oo ah arday shahaadada koowaad ee jaamacadeed waxay kuu soo bandhigeysaa meelo badan oo cilmi baaris ah aaladaha ilaa nidaamyada.
Maaddaama mid ka mid ah iskuulada injineernimada korantada ugu fiican adduunka, ardayda dhigata Harvard waxaa la baraa inay diiradda saaraan nidaamyada dhismaha ee dareenka, falanqaynta iyo la falgalka adduunka. Ardaydani waxay ka gudbaan isku xirnaanta fiilooyinka, waxay qaabeeyaan dareemayaal, falanqeyn, xisaabinta iyo nidaamyo xakameyn ah; sidoo kale waxay qabtaan shaqooyin waaweyn oo ku saabsan farsamaynta macluumaadka. Tani waxay ka sii fog tahay waxa aad ka heli karto qaar ka mid ah jaamacadaha kale ee injineernimada korantada ee adduunka oo dhan.
Aqoonta aasaasiga ah ee xisaabta iyo sayniska guud ahaan waa shuruud maadaama dhaqamada injineerada korantada ee Harvard ay ku saleysan yihiin kuwan.
Waaxda injineernimada korantada ee Jaamacadda Harvard waxay si rasmi ah u soo warineysaa in injineerada korantada ee jaamacadda ay ku daba jiraan ka shaqeynta nanofabrication dheeman; qalabka kondhom; wareegyo isku dhafan oo loogu talagalay biotechnology gacanta; aalado cabirkoodu yahay milimitir; qalabka loogu talagalay barashada mashiinka; hagaajinta shabakadaha awoodda korantada iyo nidaamyada kale ee isku xira; kala saarida calaamadaha maskaxda iyo khariidadaha wareegyada maskaxda; kala bixinta macluumaadka ka soo baxa keydka macluumaadka badan; iyo xuduudaha aasaasiga ah ee wadaagga macluumaadka gaarka ah.
Xirfadahani waa kuwo si aad ah loo doonayo maalmahan dhammaantoodna waxay leeyihiin mushahar aad u sarreeya sidoo kale. Injineer koronto ku takhasusay mid ka mid ah xirfadahan ama isku darka labada iyo wixii ka sareeya waa keeg kulul oo garoonka dhexdiisa ah. Tani waa mid ka mid ah sababaha aan ugu qornay Harvard mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu barto injineernimada korantada adduunka maanta.
Harvard, dhammaan ardayda injineernimada korontada waxay ku takhasusaan wareegyada elektarooniga ah iyo aaladaha kuwaas oo iyaga siiya fursad ay ku sahamiyaan meelo kale oo badan sida;
Calaamadaha iyo nidaamka nidaamka.
Meelaha cilmi-baarista ee waaxda EE ee Harvard waxay si weyn ugu badan yihiin Circuits & VLSI, Computer Engineering & Architecture, Robotics & Control iyo Processing Signal. Jaamacadu waxay bixisaa labadaba BA iyo B.sc ee injineernimada korantada.
Jaamacadda Michigan waa jaamacad cilmi-baaris dadweyne oo aad u ballaaran ku taal Ann Arbor, USA. Maaddaama mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn Michigan, dugsigu wuxuu bixiyaa mid ka mid ah barnaamijyada injineernimada korantada ugu fiican adduunka. Waxaa lagu aasaasay 1817 magaalada Detroit, jaamacaddu waa xubin aasaase ka ah Ururka caanka ah ee Jaamacadaha Mareykanka.
Jaamacadda Michigan, injineernimada korantada waxay la socotaa injineernimada kumbuyuutarka ee hoos yimaada Waaxda Korantada iyo Kombiyuutarka (ECE) ee Jaamacadda.
Waaxdan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu ixtiraamka badan maahan Michigan oo keliya laakiin adduunka guud ahaan waxay diiradda saartaa elektaroonigga smart, tamarta iyo awoodda, macluumaadka, isgaarsiinta, otomaatiga iyo roboticska. Kuwani waa qaybo ka mid ah injineernimada korontada oo laga yaabo inaadan ka maqlin qaar ka mid ah dugsiyada EE ee adduunka.
Injineerinka korantada iyo injineernimada kombiyuutarka waxay u yimaadaan si heer sare ah waaxdan. Labada heer ee ugu sarreeya waaxda ayaa si joogto ah u kala saaraya inta u dhexeysa 7 - 5aad ee ugu wanaagsan Mareykanka iyo adduunka by USNews iyo World Report.
Hoos waxaa ku yaal waxa waaxda ECE ay ka leedahay wax ku saabsan kuwa waaweyn;
Qeyb weyn oo ka mid ah injineernimada korontada waxay siisaa aragti guud oo ku saabsan takhasusyada ay ka mid yihiin teknolojiyada macluumaadka, wareegyada, isgaarsiinta bilaa-wareedka, aaladaha robotikada, awoodda iyo tamarta, optics, nanotechnology, qalabka kombiyuutarka, xakamaynta, elektromagnetics-ka iyo waxyaabo kale oo badan. Waa sheybaarka culus gaar ahaan fasalada sare, marka hadaad jeceshahay waxqabadyada gacanta, waxaad ku raaxeysan doontaa tan weyn.
Midka ugu weyn ee injineernimada kombiyuutarka wuxuu si qoto dheer diiradda u saarayaa qalabka kombiyuutarka iyo softiweerka, iyo nidaamyada ku duugan. Weli waxaa jira mashaariic fara badan oo gacanta lagu qabto, maadaama inta badan wax walboo maalmahan si uun loogu kontoroolo kombuyuutar.
Haddii laguu oggolaado qaybtan iyada oo aad u kacsan, waxaad ku biiri doontaa ardayda kale si aad u kaxeyso hal-abuurnimo adoo ka beddelaya teknolojiyada si loo hagaajiyo caafimaadka, deegaanka, joogtaynta, amniga, tamarta, aaladaha, xogta weyn, iyo inbadan. Tani waxay ku gelin doontaa safka hore, baaritaanka, xallinta iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka maanta adduunka ka jira.
Fiidiyowga youtube-ka ee qaybta jaamacadda Michigan ee korontada iyo injineernimada kombuyuutarka ayaa ku siinaya heer sare oo ah waxa aad ka filan karto halkan.
Jaamacadani waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal Magaalada Durham, North Carolina USA. Waxaa aasaasay Methodists iyo Quakers oo ku yaal magaalada maanta ee Trinity ee 1838.
Duke waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee bartay injineernimada korontada adduunka. Barnaamijka shahaadada injineernimada korontada ee Duke waxaa ku hareeraysan maadooyin kale sida;
Nidaamyada Dijitaalka ah
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee injineernimada korantada adduunka, waa kuliyadda injineernimada korantada waxaa lagu qiimeeyay kuliyadda 5aad ee cilmi baarista iyo wax soo saarka injineernimada korantada ee Mareykanka. Jaamacadda ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay inay tahay jaamacadda 7-aad ee ugu wanaagsan Mareykanka ee injineernimada korantada ee loo yaqaan 'College Factual'.
Jaamacadda Duke ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay liiska kulliyadaha Mareykanka ee bixiya inta badan ardayda injineernimada ee CNBC.
Aqoonsiyadan iyo abaalmarintaan waxay u socdaan inay sheegaan sida ay jaamacadda duke u wanaagsan tahay waxaana loo tirinayaa sababta ay u sameeyeen liiskan ugu fiican dugsiyada injineernimada korantada adduunka oo dhan.
Sidoo kale, waaxda injineerinka korontada ee Duke waxay leedahay mid ka mid ah barnaamijyada injineernimada korantada ugu fudud ee la heli karo.
Jaamacadda Illinois ee Urbana - Champaign waa jaamacad guud oo laga aasaasay 1867 magaalada Chicago.
Jaamacadu waxay kujirtay 48 ee daabacaadda 2020 ee Kulliyadaha ugu Fiican iyo Jaamacadaha Qaranka. Jaamacaddu waa mid si weyn u ballaaran marka la eego tirada ardayda.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee injineernimada korantada adduunka, Jaamacadda Illinois waxay ardayda ku dhiirrigelisaa inay dhammaystiraan ugu yaraan laba layliyo (inta badan la bixiyo) ka hor dhammaadka barnaamijkooda si kor loogu qaado aqoontooda wax ku oolka ah ee koorsada iyo sidoo kale in la dhiso xirfaddooda xirfadeed. Jaamacaddu waxay ku daabacdaa shaqooyin iyo layliyo la heli karo ardayda qadka tooska ah layliyo iyo gudiga shaqada.
Jaamacadu sidoo kale waxay maamushaa barnaamijka 'REUs' (waayo-aragnimada cilmi-baarista ee ardayda jaamacadda dhigata) halkaasoo ardayda dhigata shahaadada koowaad la siiyo fursado ay ku dhammaystiraan mashaariicda cilmi-baarista ee xagaaga. Ardayda waxaa la siiyaa lacag inta lagu guda jiro barnaamijkan si ku filan oo ay ugu daboolaan kharashaadkooda nololeed iyo dhowr kharashyo kale inta ay ku bixinayaan barnaamij kasta oo REU ah.
Waaxda injineernimada korontada ee iskuulka waxay bixisaa koorsooyin hoosaadyo ay ka mid yihiin;
Beeraha iyo Mawjadaha
Processing Signal Analog, iyo
Shaybaarka Nidaamka Dijital ah.
Jaamacadda dhexdeeda dhammaan ardayda injineernimada korontada waxay marin u leeyihiin Shaybaarka Naqshadeynta Sare ee Mashruuca kaas oo iyaga siinaya khibrad tayo leh oo ku saabsan dhinaca injineernimada korantada.
Jaamacadda Princeton waa jaamacad cilmi-baaris gaar loo leeyahay oo dhexdhexaad ah oo ku taal xaafadda Princeton, New Jersey. Waxaa la aasaasay 1746 oo ku taal Elizabeth oo ah Kuliyadda New Jersey Hay'addu waxay u guurtay Newark 1747, ka dibna waxay u socotaa goobta hadda sagaal sano ka dib. Waxaa loo beddelay Jaamacadda Princeton 1896.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee injineernimada korantada adduunka, Jaamacadda Princeton waxay ardayda ka caawisaa inay ku guuleystaan ​​hanashada injineernimada korontada iyaga oo aan kaliya barin oo aan ku tababarin korantada iyo korantada laakiin sidoo kale u soo bandhigaya dhinacyo kale oo badan sida sayniska kombiyuutarka, sayniska qalabka, tamarta, fiisikiska, bayoolajiga. , cilmiga neerfaha, dhaqaalaha, maaraynta, siyaasada guud iyo dhinacyo kale oo badan.
Jaamacaddu waxay bixisaa qalinjabiyey iyo barnaamijyada tacliinta sare xagga injineernimada korontada, oo ay si rasmi ah u aqoonsan tahay Guddiga Aqoonsiga injineernimada ABET.
Semistar kasta, waxaa jira barnaamij “guryo furan” oo ay soo qabanqaabisay waaxda ardayda dhigata shahaadada koowaad taas oo siineysa ardaydan fursadda ugu wanaagsan ee ay ku soo bandhigaan mashaariicdooda oo ay mid-mid ula hadlaan macallimiinta iyo injineernimada korantada heer sare si ay u helaan khibrad iyo hagitaan gacan-ku-hayn ah waa maxay injineernimada korontada.
Iskuulka Injineerinka ee Jaamacadda Princeton wuxuu bixiyaa Bachelor of Science ee injineernimada korantada. Koorsooyinka waxaa ka mid ah:
Hawlgalka Calaamadaha Istaatistikada.
Beddelka Tamarta Qoraxda.
Qalabka elektarooniga ah
Jaamacad cilmi baaris saldhig farsamo oo gaar loo leeyahay oo ku taal Pittsburgh, Pennsylvania. Waxaa aasaasay 1900 Andrew Andrew Carnegie oo ah Iskuullada Farsamada Carnegie. Kuleejka injineernimada ee CMU wuxuu kujiraa 5th qaran ahaan (US News iyo World Report).
Jaamacadu waxay caan ku tahay kulliyadeeda abaalmarinta ku guuleysta ee loo yaqaan la shaqeynta ardayga si loo xaliyo dhibaatada bulshada ee sayniska iyo tikniyoolajiyada iyadoo loo marayo habab kala duwan.
Waaxda Carnegie Mellon ee Injineerinka korantada waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada Bachelor Degree oo aad u jilicsan taasoo bixisa aasaas adag oo ku saabsan xirfadaha lagama maarmaanka ah ee ECE ee siinaya ardaygooda meel ay ku quustaan ​​aaggooda ay xiiseynayaan. Ardaygu wuxuu dooran karaa mid ka mid ah shanta iskuul ee soo socota
Sayniska Qalabka iyo Nanofabrication
Signal iyo Nidaam
Jaamacadda Carnegie Mellon waxay ku qoran tahay dugsiyada ugu fiican ee injineernimada korantada adduunka dhowr arrimood oo wanaagsan awgood. Qeybtooda EE waa tan ugu weyn kuliyada injineernimada dugsiga waxayna u horseedday sanado cilmi baaris iyo waxbarasho.
Jaamacadu waxay ubaahantahay GRE General Test dhamaan codsadayaasha sidoo kale waxay ubaahantahay dhibcaha imtixaanka TOEFL ee aan ka yarayn 84 hal fadhi oo ardayda caalamiga ah.
Halkan waxaa ah jaamacad kale oo injineernimada korontada ku wanaagsan oo aad iska ilaaliso. Machadka Farsamada ee Georgia waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Atlanta, Georgia. Samee 13-kii Oktoobar 1885.
Iskuulku wuxuu bixiyaa mid ka mid ah barnaamijyada injineernimada korantada ugu wanaagsan Mareykanka iyo adduunka guud ahaan. Loogu aqoonsaday inuu yahay dugsiga 4-aad ee ugu fiican injineerinka korantada heerka koowaad iyo kan 6aad ee ugu wanaagsan barnaamijyada injineernimada korantada ee ka qalin jabiya Mareykanka.
Georgia waxay ardayda siisaa fursado badan oo cilmi baaris ah oo ay ku jiraan Barnaamijka Fursadaha Cilmi-baarista ee Shahaadada Sare ee ECE (UROP).
Astaamaha Barnaamijka Injineerinka Korantada.
Dugsiga Georgia Tech's Electrical and Computer Engineering (ECE) waxaa loola jeedaa ardaydooda iyo macalimiintooda "tinkerersers, abuurayaasha, iyo dadka sameeya sixirka ee sameeya." taas oo male-awaal u ah himilada ardayga doonaya inuu ka qayb qaato hal-abuurnimadooda B.Sc. barnaamijka injineernimada korontada.
Fursadaha cilmi baarista waxaa ka mid ah:
Barnaamijka Aqoonyahanada Cilmi Baadhista Fursadda
Barnaamijka Mashaariicda Isku Dhafan ee ECE's
Barnaamijka Fursadaha Cilmi-baarista Jaamacadeed (UROP)
Sidoo kale Georgia Tech's, B.Sc. Injineernimada korontada waxay ardayda siisaa fursado aad u wanaagsan oo ay kaga qayb galaan mashaariic hal abuur leh.
Machadka Teknolojiyada ee California (Caltech) waa jaamacad kale oo cilmi baaris gaar ah ku leh Pasadena, California. Waxaa loo aasaasay inay tahay iskuul diyaarin iyo xirfadeed oo uu qoray Amos G. Throop sanadkii 1891.
Caltech oo xubin ka ah Ururka Jaamacadaha Mareykanka sidoo kale waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada korantada adduunka ugu fiican. Caltech wuxuu kujiraa No.12 daabacaadda 2020 ee Kulliyadaha ugu Fiican iyo Jaamacadaha Qaranka.
Caltech, waxaa jira isku dheelitirnaan muxaadarooyinka fasalka, sheybaarka iyo khibradda qaabeynta ardayda
Waaxdooda injineernimada korontada waxay bixisaa barnaamijka Bachelor of Science ee qaybaha hoose oo ay ka mid yihiin;
Calaamadaha, Nidaamyada, iyo Isbedelada.
Shaybaarka Mashruuca Elektarooniga ah.
Jaamacadda Purdue oo ku dareysa tirada ugu fiican iskuulada injineernimada korantada adduunka waa jaamacad cilmi baaris guud ku leh West Lafayette, Indiana. Jaamacadda waxaa la aasaasay 1869.
Jaamacadda Purdue waxay u taagantahay bayaan hadaf ah "u adeegida iyo hogaaminta gobolka Indiana, qaranka, iyo xirfada adduunka oo dhan ee injineernimada korantada iyo kombiyuutarka, iyadoo waxbaraysa jiilka xiga ee injineerada, iyadoo la helayo horumarka aqoonta aasaasiga ah iyo codsiyada. , iyo hal-abuurnimo iyo ka-qaybgal wax ka qabanaya caqabadaha adduunka ka jira ee saameynta bulshada ku leh ”. Barnaamijka injineernimada korantada ee Purdue ayaa hadda lagu qiimeeyay kan 9aad ee ugu fiican.
Qeybta korantada iyo injineernimada kombuyuutarka ee jaamacada Purdue waxay bixisaa Bachelor of Science oo aqoon durugsan ku leh fiisikada iyo xisaabta. Ardaydu si wanaagsan ayey ugu diyaar garoobeen xirfad ku saabsan cilmiga injineernimada korontada.
Koorsooyinkooda aasaasiga ah waxaa ka mid ah:
Falanqaynta Wareegga toosan.
Qiyaasta elektiroonigga iyo farsamooyinka.
Falanqaynta Wareegga Elektarooniga ah iyo Naqshadeynta
Halkan waxaa ku yaal jaamacad dawladeed oo aad u ballaadhan marka loo eego tirada ardayda. Jaamacadda Maryland waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ah oo ku taal xaafadda College Park, Maryland. Waxaa la aasaasey sanadkii 1856. Jaamacadu waxay ku jirtaa jaamacadda 22-aad ee ugu sareysa qaranka (2018 US News iyo World Report).
Waaxda Korantada iyo Injineeriyada Kombiyuutarka ee A. James Clark School of Engineering UMD waxay u abuureysaa xalal teknolojiyad casri ah meelo badan oo ka socda isgaarsiinta gacanta ilaa qoraxda; laga bilaabo wadnaha wadnaha illaa aalado iskiis u shaqeysta; laga bilaabo shabakadaha wireless-ka ilaa dareemayaasha bio-engineered ee lagu ogaado cudurrada halista ah.
Ujeedada laga leeyahay siinta waxbarasho heer sare ah ee korontada iyo injineernimada kombiyuutarka ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta, Jaamacadda Maryland waxay ardayda ku tababbaraysaa inay noqdaan injineero xirfadlayaal ah, iyagoo sameynaya cilmi-baarisyo isku-dhafan oo isku-dhafan.
Jaamacadda Florida waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku taal Gainesville, Florida oo ay ku nool yihiin arday aad u tiro badan. Waa xubin sare oo ka tirsan Nidaamka Jaamacadda Gobolka ee Florida Aasaasid 1853.
Jaamacadda Florida waxay bixisaa Bachelor badan oo Saynis ah oo injineernimada korontada ku takhasusay oo ka timid Qalabka Elektarooniga ah iyo Circuits Electromagnetics, Isgaarsiinta Awoodda iyo Photonics Computers iyo Nidaamyada & Xakamaynta. Waaxdu waxay bixisaa laba heer sare ah, mid ka mid ah injineernimada Kombuyuutarka iyo tan kale ee injineernimada korantada.
Waaxaha injineernimada korontada waxay leeyihiin tas-hiilaad shaybaar oo balaaran iyo barnaamijyo cilmi baaris oo kaladuwan oo ka caawiya labadaba habab tijaabo iyo aragtiyeed ee injineernimada korantada iyo kombiyuutarka.
Waaxda ECE waxay leedahay diirad cilmi baaris aasaasi ah oo ku saabsan amniga internetka, injineernimada Biomedical, softiweerka, gawaarida & aerospace, internetka waxyaabaha (IoT) iyo Smart Power.
Jaamacaddani waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo ku taal Evanston, Illinois. Waxaa la aasaasay 1851 sagaal nin oo hadafkoodu ahaa inay aasaasaan jaamacad u adeegi doonta Gobolka Waqooyi-galbeed. Jaamacaddu waa jaamacadda gaarka loo leeyahay ee ugu sareysa aagga.
Waaxda injineernimada korantada iyo sayniska kombiyuutarka ayaa ugu weyn Northwest McCormick School of Engineering.
Waaxdu waxay bixisaa Bachelor of Science ee injineernimada korontada oo aasaasi u ah injineernimada korantada iyo sidoo kale Masters of Science ee injineernimada korantada iyo Ph.D. xagga injineernimada korontada.
Barnaamijka waaxda korontada iyo sayniska kombiyuutarka waa mid jilicsan maadaama ay u oggolaaneyso ardayda inay sii wataan xiisaha ay u qabaan injineernimada korantada ama injineernimada kombiyuutarka.
Iskuulka Colorado ee macdanta waa machad kale oo cilmi baaris dadweyne ah oo lagu qiimeeyo jaamacadaha ugu wanaagsan ee bulshada si loo barto injineernimada korantada adduunka. Wuxuu ku yaallay Golden, Colorado, Mareykanka, dugsiga waxaa markii hore la aasaasay 1874 si loogu adeego warshadaha macdanta.
Laga soo bilaabo 2016 ilaa 2019 QS World Ranking jaamacaddu waxay ku jirtaa hay'adda ugu sareysa adduunka ee Macdanta iyo Macdanta Injineernimada. Waxay diiradda saaraysaa sayniska iyo injineernimada, halkaas oo ardayda iyo macallimiintu ay si wada jir ah wax uga qabtaan caqabadaha waaweyn ee haysta bulshada maanta - gaar ahaan kuwa la xiriira Dunida, iyo injineernimada deegaanka.
Iskuulka Colorado ee macdanta, barnaamijka injineernimada korontada wuxuu bixiyaa tababar waxbarasho oo heer sare ah, khibrad cilmi baaris iyo barasho mashruuc ku saleysan, oo leh takhasusyo ku saabsan anteeno iyo isgaarsiinta wireless, macluumaadka iyo nidaamka cilmiga iyo nidaamka tamarta iyo korantada korantada iyo sidoo kale fursado badan oo lagu shaqeeyo meelaha maadooyinka lagu barto.
Kulliyadda, ardayda heerar kasta oo ka bilaabaya shahaadada koowaad waxay haystaan ​​fursad ay ku sameeyaan baaritaanno ay la socdaan taageerada macallimiinta. Kulliyaddu keligeed waxay xiriir adag la leedahay dhowr shirkadood oo maxalli ah iyo kuwa caalami ah si ay ugu sahlanaato xitaa ardaydooda inay la soo galaan layliyo lacag bixin ah oo ay la leeyihiin warshadan, dhisaan aqoontooda xirfadeed isla markaana ay fursado ugu abuuraan naftooda wershadaha waaweyn ee aagga korantada.
Iskuuladan 15ka ah ee halkan ku taxan inay yihiin iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka kooxdeena ma aysan qiimeynin, halkii ay ka qiimeyn lahaayeen ururo lagu kalsoon yahay sida US News iyo World Report. Waxaan u soo xulnay sababtoo ah sida ay ugu kala sarreeyaan jaamacadaha kale ee adduunka waxaanan go'aansanay inaan hubinno iyaga si aan u helno faahfaahin ku saabsan sababta ay ugu sarreeyaan ka dibna ugu soo bandhigno liistadayada ugu wanaagsan ee injineernimada korantada.
Mid kale oo ka mid ah maqaalkeenna midkan oo kale ah, waxaan dib u eegnay liis la daabacay oo ah jaamacadaha ugu wanaagsan barnaamijyada injineernimada guud ee guud oo waliba liis kale ayaan ka samaynay iskuulada guud ee injineernimada ugu wanaagsan ee deeqaha waxbarasho u leh ardayda iyo jaamacadaha badankood ee liiskan ku yaal ayaa iyaguna halkaas ka sameeyey.
13 Dugsiyada Injineeriyada Kombiyuutarka ee ugu Fiican Caalamka
15 Shaqooyinka Injineerinka Bixinta Ugu Badan Kanada
15-ka ugu sareeya Jaamacadaha Injineeriyada Afrika
10 Noocyada Ugu Fiican ee Shaqooyinka Injineeriyada Farsamada Hada
Top 15 Jaamacadaha Injineerinka ee Ontaariyo
Barashada Hagaha Dibadda
darajaynta injineernimada korontadajaamacadda injineernimada korontadadugsiyada injineernimada elektarooniga ahjaamacadaha injineernimada korantada sare ee usajaamacadaha ugu sareeya ms ee injineernimada korontada adduunkadarajaynta injineernimada korantadaqiimeynta adduunka ee jaamacadaha loogu talagalay ms ee injineernimada elektaroniga
Previous Post:Top 13 Biilasha Caafimaadka iyo Koodh Bixinta Koorsooyinka Khadka Tooska ah
Post Next:50 + Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Mareykanka ee Takhasusyo kala duwan leh
Pingback: 10 Jaamacadaha Injineerka Aeronautical Best ee UK 2021
Pingback: 13ka Jaamacadood ee ugu sarreeya MS ee Sayniska Kombiyuutarka ee Adduunka 2021
Pingback: 10 Jaamacadood ee ugu Fiican New York ee Ardayda Caalamiga ah